Tacsi ku socota qoyska Marxuun Maxamed Feero Askar | Cabays.com
Tacsi ku socota qoyska Marxuun Maxamed Feero Askar
June 30, 2017 - Written by Cabays
Qeeridu waaxaq, waa mid aynu kuwad xukumanahay dhamaanteen, Waxaa manta kugeeryooday magaalada Hargeysa Maxamed Feero Askar. Markuunku wuxuu kudhashay magaalada Hargeysa, Xaafadhii Daruuraha, gaarahaan makhaayadii SAbti ee Hargeysa. Marxuunku waxa uu Dugsigiisii wax barasho kabilaamay Shacab Booys kii, waxa uu dugsigii sare Galay kana dhamaysatay Xalane ee kuyaalay Dumbuluq magaalada Hargeysa.
Marxuun Maxamed Feero Askar waxa uu wax Barasho u aaday Dalka Marsar horaan tii 1980kii Dalka Masar.
Marxuunku waxa uu uga siigudbay Dalka Hindiya oo uu kasii waxay wax barashadiisii taasi oo kuqaatay Shahaadii jaamacada Business Studies.
1987 Waxa uu shaqo u aaday dalka Sucuudig gaarahaan magaalada Riyaad. 1989kii Marxuunka Ilaahay naxariistii jano haka waraabiyee waxa uu uga siigudbay dalka UK. Halkaas oo uu kuqaadatay wakhtigiisii ugu badnaa ee uu joogay qurbe.
Marxuunka waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaaha naxariistii jano kawaraabiyo, dhamaan caruurtii uu katagayna samir iyo iimaan kasiiyo.
Maxamed Feeroo Askar wax uu ahaa shaqsi afgaaban, jecel in uu dadka caawiyo. Waxanu ilaahay igu baryaynaa in ilaah naxariistii jano kawaraabiyo. Waxaan halkan iyan katacsiyadaynayaa Dhamaan Reer Ismaaciil Askar, reer Xussen askar iyo dhamaan reer Askar meel ay joogaanba.
Abaadir muxumed jaamac
Axmed xassan carwo
Cabdilaahi xassan Guuleed
Saleebaan cumer kujoog
Walli cabdilaahi yassin
Musharaxa Madaxwaynaha Muuse biixi
Axmed Xussen Caabi
Mujaahid Axmed Wayse cade
Cali xassan kalax
Maxamed Cabdilaahi Yaasin
Cabdikariim Muxumed Sheekh
Cumar Cabdilaahi yaasin
Cabdi muuse Maxamuud
Xassan Cali salaan Axmed Daad
Mustafe Cali salaan
Fuaad Xassan Yassin
Mukhtar Cali waraabe
Cumar Aaden Dhiiriye
Naasir Maashe Cali xirsi
Ismaaciil Maxamed Gadiid
Mustafe Maxamed Gadiid
Cabdikariim Xaaji Aaden
Cabdiraxmaan Aaden Cusmaan
Cabdil Cali Cadaani
Guray Cali Cadaani
Axmed Yuusuf Cilmi
Yaasin Sheeke Xariir
Mukhtaar Maxamed Xirsi
Cabdiqaadir Aaden Dheer
Xassan Cabdilaahi Guray
Cabdilaahi maxmed Cali
Maxamed Yuusud Cilmi
Axmed Muuse Maxamuud
Siciid Cali Hakaale
Faysal Ciise Geel Jire
Naasir ciise Geel Jire
Xussen Cali IId bare
Mukhtaar Xassan Xaashi
Hassan Cali iid Bare
Salaan Cabdilaahi Yaasin
Maxamed Hussein Ismaacil
Cabdi cumer Boobe
Maxamed yusuf Cade
Cabdisamad Axmed Yare
Mubaarik Axmed yare.
Axmed xassan Shariif
Dhamaan Dadkan oo kale jooga daafaha dacalad Uk gaarahaan magaalooyinka London, Bristol, Cardiff, Birmigahm, Manchester, Leeds, Swansea Iyo Dhamaan Waayeelka kudhaqan dhamaan magaaloouinkaa korku xusan waxay waxay TaCsiyadaynayaa Marxuum Maxamed Feero Askar , waxaanay ilaahay uga baryayaan in naxariistii jano kawaraabiyo
Qore Maxamed Cabdilaahi Yaasin